निक जोनास प्रेमिका प्रियंका चोपडासँगै किन आए भारत ? «
निक जोनास प्रेमिका प्रियंका चोपडासँगै किन आए भारत ?
Published : 24 June, 2018 9:59 pm
अभिनेत्री प्रियंका चोपडा अहिले अमेरिकी पप गायक निक जोनाससँगको प्रेमसम्बन्धका कारण चर्चामा छिन् । पछिल्लो समयमा दुवैको भेटघाट बाक्लिएको छ । दुवैले आफ्नो अधिकांश समय एकअर्काको साथमा रहेर बिताइरहेका छन् । यसैबीच अहिले फेरि दुवै एक साथ भारत आएको खबर मिडियामा छाइरहेको छ । प्रियंकाका साथ निक जोनास भारत आएका छन् । निक प्रियंकाका साथ भारत किन आए त भन्ने कुरालाई लिएर मिडियाहरुले विभिन्न अड्कलहरु गरिरहेका छन् ।
खबरहरुका अनुसार प्रियंकाले भारतको मुम्बईमा एक नयाँ बंगला किनेकी छिन् । जसको मूल्य करिब १०० करोड रहेको छ । उनको यो बंगला निकै आलिशान रहेको छ । प्रियंकाले आफ्नो शानदार बंगलामा साथीहरुका साथ पार्टीको योजना बनाएकी छिन् । त्यही पार्टीमा प्रियंका निकलाई आफ्ना साथीहरुसँग भेटाउन चाहन्छिन् भने यही मौकामा आमा मधु चोपडासँग निकको भेट गराउने योजना प्रियंकाको रहेको छ ।
केही दिनअघि प्रियंका निकको परिवारमा भएको विवाहको कार्यक्रममा उपस्थित भएकी थिइन् । साथै निकका परिवारसँग रमाइलो गर्दै गरेका तस्बिरहरु सार्वजनिक भएका थिए । अहिले निक प्रियंकाको परिवारलाई भेट्न भारत आएका छन् । यसबाट जो कसैले पनि भन्न सक्छ प्रियंका र निक एक अर्काको गहिरो प्रेममा डुबिसकेका छन् ।
तर प्रियंका र निकले भने आफूहरु प्रेम सम्बन्धमा रहेको कुरालाई न त सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरेका छन् न त सम्बन्धमा रहेको खबरहरु प्रति कुनै आपत्ति जनाएका छन् ।